Maalinta: Meey 5, 2016
Xarumaha Isboortiga ayaa lagu qabtay Xarunta Dhexe ee Yalnizçam
Xarumaha Ciyaaraha waxaa laga dhisayaa Yalnızçam Ski Center: Gudoomiyaha Ardahan Ahmet Deniz, wuxuu aadayaa aagaga dhismeyaasha isboortiga ee gobolka ilaa goobta barafka ee Yalnızçam laga helay. Nooca jawiga barafka ee Yalnızçam wuxuu dhererkiisu yahay qiyaastii 2000 mitir, [More ...]
Ardayda Nidaamka Isgaadhsiinta Diyaargarowga in ay tagaan Roomaaniya
Ardayda Nidaamka Tareenka waxay isku diyaarinayaan inay aadaan Romania: Şehit Kemal Özalper Dugsi xirfadeedka iyo farsamada ee Anatolian High, 2015 Barnaamijka Tababarka Xirfadeed ee Midowga Yurub ERASMUS + [More ...]
RayHaber 05.05.2016 Warbixinta Shirka
Nadiifinta iyo kala-gooyaha iyo jarista shaqada ayaa la qaban doonaa ka hor inta aan la dayactirin baabuurta (TÜDEMSAŞ) Gawaarida la waday iyo aan lahayn darawalku waa la nadiifin doonaa, adeegga aluminotmite waa in lagu qaataa khadadka tareenada.
10, mid ka mid ah maraakiibta safarka ee cusub ee Izmir ayaa yimid
Maraakiibta cusub ee Izmir ee 10. It Sait Altınordu gemi waa markab ay ka qeybgali doonaan Konak Kocaoğlu berrito ee Konak Pier. [More ...]
Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka ee Hafiz Major Road
Tram Shot ee Trades ee Wadada Hafız Binbaşı: Hawlaha dhismaha ayaa socda mashruuca taraamka si loo hirgaliyo 2017 gudaha Izmit. Gorgortanka farshaxanka ee wadada maxkamadda ka dib agaasime matxafka [More ...]
Gawaarida Dhaawaca ee 1 ee Tareenka Elazığ: 100 mitir gudaha Elazığ iyada oo sababtu tahay tareenka shilka ku dhacay darawalkii gaariga uu dhaawacmay. Sida ay sheegayaan wararka la helay, shilka ayaa ka dhacay isgoyska heerka isaga gudba Saldhigga Baska Elazığ. Si toos ah ula xiriir Yaar [More ...]
Furaha ayaa lagu riixay URAYSİM: Xarunta tijaabada nidaamka-tareenka ee aaga juqraafi ahaan ayaa laga hirgaliyay Eskişehir. Xarunta Cilmi-baarista iyo Imtixaanaadka Waddooyinka ee National University Rail Systems (URAYSİM) ayaa la filayaa in la dhigo sannadkan [More ...]
Qorshaha Masterka Dalxiiska ayaa loo Diyaariyey Xarunta Ski ee Tokat: “Dalxiiska Master Plan” waxaa loo diyaarinayaa abuuritaanka mashaariic ka qayb qaadan doona dalxiiska gudaha iyo dibedda ee Ba ​​foreigniftlik Degmada Ski Center ee Tokat. Gudoomiyaha Başçiftlik Mehmet Özcan, [More ...]
Waxay tagaan Ordu Boztepe oo wata xadhig iyo faaruqin
Ordu Paragliders waxay ku yimaadaan Boztepe iyagoo wata gawaarida fiilada: Parachute xiisaha leh ee u yimid Ordu waxay ku raaxaystaan ​​paragliding iyagoo taga Boztepe oo leh dhererka 500. Ordu, oo sidoo kale loo yaqaanno caasimadaha haroolka iyo malabka ee Badda Madoow ee Bariga [More ...]
Ordu Boztepe oo ka mid ah barta telefishinka
Ordu Paragliders waxay ku yimaadaan Boztepe iyagoo wata gawaarida fiilada: Parachute xiisaha leh ee u yimid Ordu waxay ku raaxaystaan ​​paragliding iyagoo taga Boztepe oo leh dhererka 500. Buurta ku taal Ordu, oo sidoo kale loo yaqaan caarada barafka iyo malabka ee Badda Madoow ee Bariga [More ...]
Wadooyinka Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa ayaa Is Bedelay: Mashruuca tareenka xawaaraha sare ee la qorsheeyay inuu ka gudbo degmada Bursa Yenişehir ayaa isbeddelay. Dhawaan, warar kala duwan oo ku saabsan dariiqyada iyo idaacadaha ku saabsan tareenka xawaare sare ku socda iyo [More ...]
Mucjisada metro ee degmada Cubuk Ankara
Injiil-tareenka dhulka hoostiisa ah ee degmada Çubuk ee Ankara: Guddoomiyaha AK Party Çubuk Baki Demirbaş wuxuu si wanaagsan uga warbixiyey mustaqbalka nidaamka tareenka fudud xarunta degmada. Gudoomiyaha Xisbiga AK Party Rod Demirbaş, waxaa soo qaban qaabiyay dhismaha xisbiga [More ...]
YHT Route ee Sapanca
Marxaladda Safarca Maraakiibta Wadada ee Sapanca: Dowlada hoose ee Sapanca ayaa qabatey shirkii golaha caadiga ee Maajo. Wadada tareenka Xawaare Sare leh, Qubeyska degmada, agagaarka daaqsinka Talyaani [More ...]